Sciences soLuntu Ngco liseko
by Kara Kuntz
Yintoni Eyiyo Nento Engenayo
Ngomngeneleli weendwendwe uKara Kuntz, utitshala wendawo esingqongileyo kunye nochwepheshe wezolimo.
Ngokuchasene nentsholongwane eninzi, i-Great Pacific Garbage Patch ayikho isiqithi esiqingqileyo sootywala oluqhambileyo kwiPacific, kodwa kunokuba isobho esingenakulinganiswa naso singenakulinganiswa.
Uninzi lwale nkunkuma luvela eNyakatho yeMerika okanye e-Asiya, kwaye iya kwi-patch kwelinye lamanzi amanzi. Le milambo ibangelwa yimifula, umoya, kunye nokuguqulwa kwamanzi amaninzi asekelwe kumgangatho weqondo lokushisa okanye ityuwa.
Ezi zijikelezo ezine zidibanisa kwi-North Pacific Gyre, eyaziwa ngokuba yiNorth Pacific Subtropical High. I-gyre yinkqubo yokujikeleza i-currents of sea eyenziwa ngumoya kunye nemikhosi yokujikeleza yomhlaba.
I-Pacific Great Garbage Patch yenziwe ngama-patches amabili, i-Western Garbage Patch, ephakathi kweJapan, kunye ne-Eastern Pugbage Patch, ephakathi kwentshona yonxweme yase-United States naseHawaii. Uninzi lweengxowankulu zePasifiki enkulu yeParbage yeParbage idonsa kwii-gyre ngenye yee-currents ezine, kwaye ihlala ibanjwe kwiziko layo lokuzola.
I-Great Pacific Garbage Patch iqukwe ngokubanzi kwiiplasplastics , okanye izicucu ezincinci zeplastiki. Olu hlobo lokungcola kwamanzi lenziwe ngeentlobo ezintathu eziphambili zorhafu:
Plastics. Iplastiki yenza malunga ne-80% yeengxowa. Iiplastiki yinto encinci kwaye ininzi, kwaye ngenxa yokuhlala kwayo kunye nokuxhamla, kuyinto ekhethekileyo xa ukwakha umthengi kunye nemveliso yoshishino. Iplastiki ayinakuqhekeza phantsi ngezinto eziphilayo, oko kuthetha ukuba xa iphelile elwandle, iya kuhlala apho, ibe neefoto-ezihlaziyiweyo kwaye iqhutywe zibe ziincinci, kodwa azizange zinyamalale. Ezinye zeengcambu zincinci kakhulu - ezi nyi-microbeads zithatha iindibano zazo zeengxaki.
Ukugqithiswa okukhulu. Imfucuza enkulu, eyenza malunga ne-20% ye-debris, ivela ngokubanzi kwimisebenzi yokuloba, i-oil rigs, okanye i-spillage evela kwiinqanawa zokuthumela.
Utywala obushushu. Iqhosha liqukethe inani elininzi lokutshisa. Ama-oceanographer esandul 'uqikelelo ukuba ukufika kuma-70% edoti olwandle alikho ngaphantsi kodwa kusezantsi kolwandle.
Iimpembelelo zePasifiki enkulu ye-Garbage Patch zibanzi kwaye ziyingozi. Izilwanyana zasendle zasemanzini zivakalelwa yimiphumo enkulu kakhulu. Imizekelo embalwa ibandakanya:
Iinqwelo zorwandle, ukukhwela iiplastiki ze-jellyfish okanye ezinye izilwanyana zasolwandle.
Ii-Albatross kunye nezinye iintaka zaselwandle, ukutya izibonda zeplastiki kubantwana babo, zikhokelela ekufeni ngenxa yendlala kunye nokunyanzelisa amanzi.
Ukutywina kunye nezinye izilwanyana zasemanzini, ngokuqhelekileyo zibanjwe kwiinetha zokuloba.
Abaxhasi be-Filter, abasebenzisa iiplastiki kwiindawo zabo eziqhelekileyo ze-plankton okanye amaqanda eentlanzi.
Iiplastiki eziqubuzayo zinokuthintela ukukhanya kwelanga ekufinyeleleni i-photosynthetic plankton okanye i-algae, iindidi ezinobuncinci obukhonza umsebenzi obalulekileyo njengesiseko sewebhu yonxweme yokutya. Ukuba kukho iplankton encinane ekhoyo, izilwanyana ezitya iplankton, njengeentlanzi okanye intlanzi, ziya kuncipha ngamanani. Ukuba iintlanzi kunye neentlanzi ziyancipha, kunokuba izilwanyana ezinjengeentlanzi, ityhuna kunye nemikhomo ziza kubona ukuba abantu bancitshiswa.
Isiqulatho esikhulu seLwandle iPasifi sithintela ubomi bomntu:
Ukuba i-webs yokutya kwezilwandle iyancitshiswa, intlanzi kunye nezinye iintlanzi zokutya zasemanzini ziya kuba zifumaneke ngaphantsi kwaye zibiza kakhulu.
Iiplastiki iqulethe iikhemikhali ezifana ne-BPA, okanye i-bisphenol A, ekwazi ukungena emanzini kwaye ilungelwe ukuba ibangele iimeko zendalo kunye nempilo. I-PCB, okanye i-biphenyl ene-polychlorinated, iyakwazi ukuqokelela ngeplastiki, kwaye ikwazi ukuqokelela kumazinga enobungozi kwimpilo yolwandle kunye nabantu abadla ubomi baselwandle.
I zi gulane
Nangona izazinzulu ziye zafunda i-Great Pacific Garbage Patch ngokubanzi, ziye zafumanisa izisombululo ezimbalwa zokucoca i-patch. Ngenxa yokuba iqhosha likhulu kwaye likhona kude nxwemeni, akukho lizwe liye laya phambili ukujongana nomsebenzi omkhulu kunye neendleko zokususa i-debris. IPacific iyanzulu kakhulu ukuya kwi-trawl kunye namanatha amancinci okwaneleyo ukuba athabathe i-debris ayengeke ayibambe ngobomi ubomi baselwandle. Izazinzulu ziyavuma ukuba isisombululo esihle kakhulu sokuhlambulula iPatch Pacific Garbage Patch kukunciphisa ukusetyenziswa kweeplastiki ezingezizo i-biodegradable kunye nokukhuthaza ukusetyenziswa kwezinto eziphathekayo ze- biodegradable and reusable materials.
I-Sugar ivelisa iziphumo ezinzima kwiNgqongileyo
Izizathu kunye neempembelelo zikaSmog
Ngaba Imvula Inokubulala?
Inkcazo yeGramarian kunye nemizekelo
Imbali Eboniswayo Yesihlunu Esithathu
Iimpawu zokuBhala eziMathathu eziPhambili eziPhambili
I-Top 6 Times Superman iguqulwe ngokupheleleyo amandla
Abantu baseMandulo baseSartan babenomPolisa oyimfihlo
I-Pi Bond Inkcazo kwiKhemistry
Ukudlala njani umdlalo weCapeti's Choice Tournament
Imbali yamaMnyama amaMerika eMelika